NewGenApps, Ku takhasusay xalalka cusub ee IT -ga iyo hormuud u ah tiknoolajiyad kasta oo casri ah.
La aasaasay bishii Juun 2008, NewGenApps waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya hirgelinta farsamada cusub. Waxa ka bilaabmay Horumarinta Codsiga Smartphone -ka iyo Xalalka daruuriga ayaa hadda u kala baxay Sirdoonka Artificial, Barashada Mashiinka, Falanqaynta Xogta Weyn iyo xalalka AR/VR sidoo kale.
At NewGenApps, waxaan ku dadaaleynaa inaan sii wadno bixinta xalalka IT-ga ee adag iyo goynta smartphone codsiyada marka suuqa uu kobco. Iyada oo leh asal IT oo kaladuwan iyo xirfado horumarineed oo xoog leh, kooxdayada khabiirka ah ayaa si gaar ah ugu heellan inay siiso macaamiisheenna adduunka oo dhan xalka farsamada ugu fiican. Shirkadda, oo ku bilaabatay 3 xubnood sanadkii 2008 waxay ilaa iyo hadda u adeegtay 1000+ macaamiil waxayna si guul leh u dhammaystirtay 5000+ mashruuc.
Na sii kuu sheegayaa kooban oo ku saabsan Socdaalkeenna
Sidii aan ku bilownay
Dhawr Qodob Oo La Gaadhay
Waan la soo shaqaynay
100+ ka mid ah shirkadaha guulaystay ee adduunka oo leh kalsooni
Noqo Kuweenna Partner
Kordhi tartankaaga kuna biir reerka NewGenApps Partners .
NewGenApps Amaan Partners
Waxaan sii kordhinaynay shabakadaha shuraakada kanaalka sanadihii la soo dhaafay. Waxaan hadda iskaashi la leenahay shirkado heer sare ah dhammaan adduunka oo dhan.
Shirkadda Badeecadda oo leh Meel Suuq oo dhisan
Ballan -qaadka Wacyigelinta Calaamadda oo si joogto ah u koraya
Barnaamijka Guul Wadaaga Guuleystay
Taageerada Iskaashiga Xirfadlaha ah
Aynu wada hadalno Partnership
Xiisaynaya inaad noqoto Saaxiibkeen, Nala soo xiriir maanta!